Ny herinandro voalohany amin'ny volana aogositra 2021 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny herinandro voalohany amin'ny volana aogositra 2021
Tsongom-baovao nanamarika ny herinandro voalohan’ny volana aogositra : fifofoana ny ain’ny Filoham-pirenena, kabarin’ny filoham-pirenena, fanehoan-kevitra samihafa amin’ny haino aman-jery, vidim-piainana midangana, Fanendrena sy fanoloana tompon’andraikitra ambony, Fanendrena sy fanoloana tompon’andraikitra ambony.
Mihazakazaka ny raharaha fifofoana ny ain’ny filoham-pirenena
Mbola nanamarika iny faramparan’ny volana jolay sy ity herinandro voalohan’ny volana aogositra ity ny raharaha fifofoana ny ain’ny filoham-pirenena, niantomboka tamin’ny fanambaran’ny Procureure générale eo anivon’ny Fitsarana ambony, Berthine Razafiarivony tamin’ny 21 jolay 2021. Nihazakazaka ny fanadihadiana samihafa nanamborana na namotorana olona nanana fifandraisana tamin’ny olona ahiana ho nanao ny fikasana, ka nanaovany fanambarana faharoa tamin’ny 1 aogositra 2021. Olona miisa 21 no voalaza fa voarohirohy amin’ity raharaha ity. Niakatra fampanoavana teny amin’ny fitsarana ny raharaha tamin’ny 4 aogositra 2021. Misy ny notanana am-ponja, misy ny nahazo fahafahana vonjy maika. Miandry ny mangarahara manodidina izany ny mpanara-baovao, indrindra fa olona manana ny maha izy azy eto amin’ny tany sy ny fanjakana ireo ahiana, na sivily na miaramila. Maro moa ireo naneho hevitra momba ny fizotran’ity raharaha ity izay nilaza fa tsy voahaja ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana, ary noheverina ho toy ny efa voaheloka ireo noahiahiana. Misy amin’izy ireo ny olona mpahay lalàna toy ny mpitsara sy mpisolovava.
Niteny ny filoham-pirenena
Ny filoham-pirenena no nitafa tamin’ny vahoaka malagasy tamin’ny alin’ny alahady 8 aogositra 2021 taorian’ny 15 andro farany nahatapitra ny hamehana ara-pahasalamana. Nalefa tamin’ny TVM sy RNM ary ireo haino aman-jery tsy miankina samihafa. Mpanao gazetin’ny TVM sy TV Plus no niatrika azy sahabo ho ora roa, nitondrany fanazavana mahakasika ny toe-draharaha samihafa eto amin’ny firenena. Nanamafy ny nambaran-dRamatoa Procureure Berthine Razafiarivony izy momba ny fifofoana ny ainy izay hita fa teti-dratsy tsy azo ekena, ary ny fitiavan-tanindrazana no anton’izao fikasana hamono azy izao. Fa miankina amin’ny fitsarana ny tohin’ny raharaha izay ao anatin’ny fanadihadiana lalina raha ny nambarany. Momba ny fanoloana mpikambana amin’ny governemanta dia midinika ny tombana atao amin’ireo minisitra izy sy ny praiminisitra Ntsay Christian izay tsy mba nandrenesany kiana, ary ho hita amin’ity herinandro ity ny momba izany satria niaiky izy fa misy minisitra tsy mahavita ny asany. Ny nanao sonia ny fifanarahana amin’ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany no tsy mampisy ny vola miditra amintsika raha ny nambarany ka noraisiny ohatra amin’izany ny QMM sy ny Ambatovy. Nasiany resaka ihany koa ny sosialy mampikaikaika ny mponina amin’ny fiakaran’ny vidin’ny entana ilaina andavanandro ka handraisana fepetra anatin’ny telo andro. Hisy ny « fonds souverain » ho apetraka hikarakarana ny fampandrosana ny firenena. Momba ny hamehana ara-pahasalamana dia mitohy izany na dia hita aza fa voafehintsika ny aretina raha ny antotanisa. Miverina amin’ny andavanandro ny fiainana. Tsy misy intsony ny « couvre-feu ». Fa mitohy ny fanajana ny fepetra sakana. Tsy azo atao ny mamory olona mikato-trano mihoatra ny 400 fa azo atao ny manao lanonana an-kalamanjana. Momba ny vakisiny dia nohamafisiny fa tsy an-tery ny fanaovana izany, ny CVO no fanefitra ho azy ary mbola tsy nanao vakisiny izy. Nilaza ny filoham-pirenena fa nahazo famatsiam-bola avy amin’ny mpiara-miombona antoka isika noho ny fahaizana mifampiraharaha, hahazona vakisiny hatrany amin’ny fatra 10 tapitrisa. Tsy mbola misokatra ny sisin-tany fa hisy ny zotra manokana inefatra avy any Paris mankaty amintsika amin’ny 22 sy 28 ho an’ny volana aogositra, ary ny 12 sy 19 ho an’ny volana septambra, ary tsy mahazo miverina any ireo olona mandeha amin’izany mandra-pisokatry ny sisin-tany.
Fampitam-baovao sy fanehoan-kevitra samihafa momba ny raharaham-pirenena
Maro lafy ny fanehoan-kevitra amin’ny fampitam-baovao samihafa momba ny raharaham-pirenena mifamahofaho ankehitriny. Na amin’ny radio sy ny televiziona na amin’ny gazety an-tsoratra, na amin’ny tambajotra sosialy amin’ny internety. Ny mpanohana ny fitondram-panjakana moa mivoy ny fanohanany hatrany ny filoham-pirenena toa ireo governora notendrena hitantana ny faritra, indrindra hatramin’ny fipoiran’ny resaka fikasam-pifofoana ny ain’ny filoham-pirenena ka nankaherezan’izy ireo azy. Momba ny tsy fandrosoan’ny firenena, ny governoran’Analamanga Hery Rasoamaromaka sekretera nasionalin’ny TGV dia nilaza mihitsy fa raha tena TGV daholo ny minisitra efa lasa lavitra isika. Andanin’izany, mavaivay ihany koa ny famakafakana sy tsikera momba ny raharaha tsy mandeha eto amin’ny firenena avy amin’ny mpandinika fiarahamonina. Anisan’ireny ny avy amin’ny mpanohitra toy ireo depiote TIM amin’ny fandaharana « miara-manonja » amin’ny haino aman-jery. Momba ity fandaharana « miara-manonja » ity dia misy anankiroa izy io hatramin’ny 29 jolay teo, dia ny an’ny MBS sy ny an’ny AZ Radio. Samy mandeha amin’ny tambajotra sosialy. Anisan’ny tsikerain’ireo depiote TIM ny fandikana ny lalàm-panorenana sy ny tsy tena fijerena ny laharam-pahamehan’ny vahoaka, ary ny tsy fahaiza-mitantana.
Andavanandrom-piainana sy vidim-piainana midangana
Anisan’ny nampimenomenona ny mpanjifa ny fiakaram-bidin’ny entana ilaina andavanandro. Ankoatra ny vidina menaka izay nihoampampana efa volana maro izao no tafakatra 10 000 Ariary mahery ny litatra, dia tafakatra hatrany amin’ny 50 000 ariary mahery ny iray gony amin’ny saribao tamin’iny herinandro iny, 500 ariary ny fatra kely indrindra azo jifaina. Teo amin’ny 30 000 Ariary anefa izany talohan’izany izay efa tsy zakan’ny maro. Ny vidin-jiro manginy fotsiny, ankoatra ny fisongan’ny fampidirana mpianatra toy ny vidim-pitaovana sy saram-pisoratana anarana ary saram-pianarana. Ny volana septambra no hanomboka ny taom-pianarana 2021-2022. Ny fanadinana bakalorea, fanadinam-panjakana farany anefa dia nanomboka ny 9 aogositra 2021 izay maharitra hadimiana, ho an’ny fampianarana ankapobeny. Fa mitohy amin’ny herinandro manaraka an’io izany ho an’ny bakalorea teknika.
Fanendrena sy fanoloana tompon’andraikitra ambony
Fahazarana isaky ny filan-kevitry ny minisitra, ankoatra ny raharaha samihafa, ny fisiana fanendrena sy fanesorana tompon’andraikitra ambony amin’ny alalan’ny didim-panjakana. Anisan’ny tamin’ny 4 aogositra 2021 ny fanendrena ny Komandin’ny Akademia militera ao Antsirabe sy ny Komandin’ny fanofanana manokana ny zandarimaria. Filan-kevitry ny minisitra natao teny Iavoloha notarihin’ny filoham-pirenena ary natrehan’ny Praiminisitra sy mpikambana ao amin’ny governemanta.
Fivorian’ny parlemantera ampitan-davitra
Araka didim-panjakana dia notanterahina nanomboka tamin’ny 3 aogositra 2021 ny fivoriana tsy ara-potoana nataon’ireo depiote, tsy tokony hihoatra ny 12 andro. Ny fankatoavana ny fisamboram-bola amin’ny mpamatsy vola no anisan’ny lahadinika tamin’izany, ilay 490 tapitrisa dolara natao sonia teny Iavoloha tamin’ny 21 jolay 2021 teo amin’ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy vola Banky iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny fananganana ny atao hoe « fonds souverain ». Natao ampitain-davitra ity fivoriana ity noho ny hamehana ara-pahasalamana. Miisa 151 ireo depiote, fa tsy ny rehetra no afaka nanaraka izany raha ny fantatra, mety noho ny tsy fahatomomban’ny teknika sy ny fitaovana. Misy ny nanamarika fa olona latsaky ny 400 ireo ka nahoana no tsy afaka nivory tanaty trano ?
Télévision numérique : StarTimes lance les nouveautés pour la période de Noël - il y a 18 jours
COP26 : Orange Madagascar marque l’évènement avec les enfants codeurs #SuperCodeurs ﻿ - il y a 25 jours